ဆရာကြီး ဂိုအင်ကာ က အိန္ဒိယ နိုင်ငံတော် တံဆိပ် ၉၆၉ တံ ဆိပ်ထဲ ထိ ထည့်ပေးထား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြတ်စွာဘုရားရှင်က “ကဲ့ရဲ့ခြင်းကြာင့် လည်းကောင်း၊ ရှုတ်ချခြင်း)ကြောင့် လည်းကောင်း ပါစိတ်အာပတ် သင့်၏”
ဦးမောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိတ်) မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များအတွက် တွေးမိတာလေးပါ »
My friend wrote>>>တရားစခန်းတွေ ဖွင့်တာယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်နဲ့ မြန်မာပြည်ထဲကို ဟင်ဒူတွေရဲ့ မွတ်စ်လင်မ် တိုက်ဖျက်ရေးနည်းလမ်းများ အမုန်းတရားများကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ သယ်ဆောင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့တဲ့ ဆရာကြီးဂိုအင်ဂါဆိုတဲ့ ငနဲကြီးတော့ အနိစ္စသဘောနဲ့ ကိစ္စချောသွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း…..
Myo Min Tun‘s photo.
ဒီနေ့ ရွှေတိဂုံ သွေးလှူပွဲ လုပ်အားပေး သွားရင်းနဲ့ ဆရာကြီး ဂိုအင်ကာ ဘုရားဖူးလာတာနဲ့ ကြုံလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ လူတွေကလည်း ကြည့်ချင်ဇော တစ်ခုတည်းနဲ့ တိုးကြဝှေ့ကြ တားတဲ့သူတွေကလည်း စိတ်တိုနေ ဆိုတော့ ဒီတစ်ပုံ ရတာနဲ့ပဲ ဆက်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။
Robert Elhose အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးကွန်ရက် ကို ဗမာပြည်ထဲ သယ်ဆောင်လာသူ၊ ၉၆၉ ကိုစတင်ထူထောင်စေသူ၊ လိုဂိုဒီဇိုင်းတွေ ချပေးခဲ့သူ။
Justic Burmaေ×ာက်ကုလားတွေလို့ပက်ပက်စက်စက်ဆဲတဲ့ ထဲမှာ သူလဲပါတာပေါ့နော်
Ko Ko Gyi My friend wrote>>>ဂိုအင်ဂါ ရွေတိဂုံလာတုန်းကပုံ ကုလားကြီး၊ ဘေးနားက သက်တော်စောင့်တွေ ကျေးလ်တွေကလည်း ကုလားတွေ၊ ဗမာတွေဆိုတာ အပြင်စီးကနေ တပည့်ခံနေရတာ မြင်စေချင်…
Robert Elhose ဘုန်းကြီးရူး နဲ့လှေလူး၊ ငါ့လှေငါထိုး၊ ပဲခူးရောက်ရောက် ဟာသရသမြောက် မျိူးချစ်ဝါဒ
ကြည့် ဘယ်လောက်နုံတဲ့ အတဲ့ လူမျိူးတွေလည်း ဆိုတာ။ ကုလားကြီး ဂိုအင်ကာ က သူတို့မနောခွေ့မယ့် ၀ိပဿနာ ဘာညာ အကြိုက်လေးလိုက်ပြီး ပြော၊ ပြီးတော့ အိန္ဒိယယောက်လှမ်းရေး ကွန်ရက် ကို ဗမာပြည်ထဲ သယ်လာ၊ လျှိူ့ဝှက်ဖွဲစည်း၊ နောက် ၉၆၉ အဖွဲ့အတွက် တံဆိပ်လိုဂို ကို သူကိုယ်တိုင် ဂိုက်လိုင်းချပေး။အိန္ဒိယ နိုင်ငံတော် တံဆိပ် ( National Emblem) က အမှတ်တံဆိပ် ကို ၉၆၉ တံ ဆိပ်ထဲ ထိ ထည့်ပေးထား။ ဗုဒ္ဒဘာသာ မျိူးချစ်ပါဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ အမြင့် အမြတ် နေ ရာ၊ ဆိုင်ခန်း တွေမှာ ချိတ်ထား၊ ကပ်ထားတဲ့ တံဆိပ်တွေက အိန္ဒိယအစိုးရ ကို သစ္စာ ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နေတဲ့ အထိ ကိုယ့်ထဲ ဘယ်သူက ဘယ်လောက် ထည့်လို့ထည့်ထား မှန်း မရိပ်မိတဲ့ လူတွေ။အတော်ကြီး ရယ်စရာ ကောင်းလှ သလို အထင်သေးစရာလည်း သိပ်ကောင်း ဖြစ် နေတာ။ ပစ္စက္ခ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သူတို့ကိုယ် သူတို့တောင် မသိ ရှာကြဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလောက် အတဲ့ လူမျိူး ရှိမယ်တောင် မထင်ဘူး။ဘာဗဟု သု တ မှ မရှိရှာ တဲ့ ၀ီရသူ လို ဘုန်းကြီး ကလည်း တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစ သိထားတာလေး လောက်နဲ့ စကြ၀တေး နတ်မင်းကြီး အလား ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်။ လူတွေကလည်း ကိုယ်စီးနေတဲ့ မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်း မသိဘဲ စွတ်ရွတ် ပြေးခိုင်း။ ကောင်းရောလူတွေ။ အံ့ဖို့သိပ်ကောင်း။ ချာလီချက်ပလင် မျိူးချစ်ဝါဒ။
Robert Elhose‘s photo.
မြန်မာမွတ်စလင်မ် များအား သောကမီး မွှေးပေးသွားသူ ဦးဂိုအင်ကာ ဆိုသူ ကွယ်လွန်
အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးကွန်ရက် ကို ဗမာပြည်ထဲ သယ်ဆောင်လာသူ၊ ၉၆၉ ကိုစ တင် ထူထောင်စေသူ၊ ၉၆၉ လိုဂိုဒီဇိုင်းတွေ ချပေးခဲ့သူ။ ဘူးဒူးဘာလာဆင်န်ဟာ သီ ရိ လ င်္ကာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ နဲ့ သီရိလင်္ကာ က အခုကွယ်လွန် သွားတဲ့ သက်တော် ရှည် ဂျပုဘုန်းကြီး နဲ့ ဗမာပြည်က ငပေါ တွေကို ဆက်ပေးခဲ့သူ။၀ီရသူ ဆိုတာ သီတဂူ ဆရာတော် ရှင်ဉာဏိဿရ ရဲ့ လက်ဝေခံ
ဉာဏိ ဿရ ဆိုတာ က ဂိုအင်ကာရဲ့ တပည့်လေးပဲ။ဂိုအင်ကာ က မွန်ဘိုင်း မှာ တည်ထားတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီထက် တစ်ပေပဲ နှိမ့်ထားတဲ့ ၀ိပဿနာ စေတီ ကို အကြောင်းပြပြီး မြန်မာ ပြည်သားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို သုံးချပ်ဖဲ မျက်လှည့်ပြခဲ့သူ။ ရွှေမန်းသား ဆရာကြီး ဦးဘခင် ကို အသုံးချပြီး ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာ တွေကို အယုံသွင်းတယ်။
ပြီးေးတာ့ အိန္ဓိယ လျိူ့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး ကွန်ရက် ကို ဗမာပြည်ထဲမှာ လာပြီး စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတယ်ဗန္ဓုလဦးစိန်ရဲ့ အဖေ အခု ရန်ကုန်မှာ အင်အားဂျာနယ် တို့ 24/7 News ဂျာနယ်တို့ ၊ ငြိမ်းပညာရေး စင်တာ တို့်ရဲ့ ပိုင်ရှင် အဖေလည်း ဖြစ်တယ်။
၉၆၉ ကို စတင် ဖွဲ့စည်းဖို့ တွန်းပို့ခဲ့သူဟာ ဂိုအင်ကာ
၉၆၉ ရဲ့ လိုဂိုဒီဇိုင်းကို ချပေးသွားသူဟာ ဂိုအင်ကာ
သီရိလင်္ကာ သမ္မတ ရာဂျာပက်ခ်စာ ရဲ့ အစွန်းရောက် ခါးပိုက်ဆောင်တွေနဲ့ ဗမာနဲ့ ရခိုင်ဘုန်းကြီးတွေကို ဆက် သွယ်ပေးသွားသူ ဟာ ဂိုအင်ကာ
This entry was posted on September 30, 2013 at 4:26 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.